TV - Telling the Real Story
Ifraah Ahmed waa dhaqdhaqaaqe bulsho oo caan ka ah Soomaliya. Si cabsi la'aan ah ee ugu ololeysa ka hortagga gudniinka fircooniga ah (FGM). Waxay ku hawlanayd barnamijka Soo Bandhigida Xaqiiqada Tahriibka ila 2017 dhawaana waxaa loo magacaabay Taageeraha Heerka Sare ee UNHCR.
Kani waa kii qaybti labaad ee taxane ah seddex barnamij oo lala gabtay Ifraax Axmed. Mawduucyada looga hadlay fiidiyowgaan waxaa ka mid ah xaaladaha foosha xun ee dadka ay la kulmaan markay ku socdaan tahriib iyo waajibaadka kuwa ka badbaaday inay dadka kale u sheegaan khataraha.
Khadar: Halista naftaada uma qulma
Abubakar: Raadinta amniga, wuxuu ku dhammaanayaa addimada
Nakhlan: Ololaha Wacyigalinta Tahriibinta
Barnaamij Gar ah Xaqiiqada Tahriibka
Telling the Real Story waxay la sameysay Universal TV, kanaal Soomaaliyeed, qabanqaabinta bandhiga khudbadda ee Tahriib.